Ukulungiselela Izithombe Zakho Iwebhu: Amathiphu Namasu | Martech Zone
Uma ubhalela ibhulogi, uphatha iwebhusayithi, noma uthumela ezinhlelweni zokuxhumana nabantu ezifana ne-Facebook noma i-Twitter, izithombe kungenzeka ukuthi zidlala ingxenye ebalulekile yokusakazwa kokuqukethwe kwakho. Ongase ungazi ukuthi alikho inani le-stellar typography noma ukwakheka okubukwayo okungakha izithombe ezifudumele. Ngakolunye uhlangothi, izithombe ezibukhali nezicacile zizothuthukisa abasebenzisi? umbono wokuqukethwe kwakho futhi uthuthukise ukubukeka nokuzwakala okuphelele kwesayithi lakho noma ibhulogi.
At Efanelekayo sichitha isikhathi esiningi silungiselela abanye abantu ukuthwebula izithombe ze-web, ngakho-ke nazi izikhombisi-ndlela ezisheshayo esizithathe endleleni.
Uyacelwa uqaphele: imiyalo yezobuchwepheshe engezansi ibhekisa ku-Adobe Photoshop CS4. Kunezinye izinhlelo ezingenza ukusebenza okufanayo, ngakho-ke uma ungenakho ukufinyelela ku-Photoshop sicela uhlole imibhalo yosizo yohlelo lwakho lokuhlela isithombe ukubona ukuthi ungazenza yini lezi zindlela.
Ishintsha usayizi iphinde ilole
Imvamisa ukulungiselela isithombe sewebhusayithi yakho noma ibhulogi kudinga ukuthi usenze sibe sincane, ikakhulukazi uma sivela kwikhamera yedijithali enama-megapixel amaningi. Kubalulekile ukwazi ukuthi ukwehla ngosayizi kusho ukwehliswa kwemininingwane, njengoba i-Photoshop ingu-mushing? ndawonye amaphikseli angomakhelwane ukuze alingane isithombe nobukhulu bawo obusha; lokhu kunikeza isithombe ukubukeka okufiphele.
Ukuze wenze inkohliso? imininingwane olahlekile kufanele usebenzise isihlungi se-Unsharp Mask (Hlunga> I-Unsharp Mask). Ungalokothi ukhumbule igama eliphikisayo - i-Unsharp Mask empeleni iyalola!
Ungabona ukuthi imininingwane icace futhi icace kangakanani Umfanekiso we-2 Ngezansi.
Izilawuli ebhokisini lengxoxo le-Unsharp Mask zingabukeka zinzima, kepha izindaba ezinhle ekulungiseleleni izithombe zewebhu ngeke kudingeke uzixoxe nazo kakhulu. Ngithola Inani le-50%, iRadius ye .5, neThreshold ye-0 isebenza cishe sonke isikhathi.
Nqampuna Izithombe Ngokomongo
Kwezinye izimo, ungahle uthande ukudala uchungechunge lwezithonjana ezixhumanisa nenguqulo enkulu yesithombe. Izimo ezijwayelekile zalokhu zemibukiso yezithombe noma izihloko zezindaba ezinenguqulo yesithonjana sesithombe esikhudlwana.
Lapho wehlisa isithombe ngosayizi wesithonjana, zama ukunqampuna isithombe ezintweni ezibalulekile ngaphambi kokushintsha usayizi. Lokhu kuvumela abasebenzisi ukuthi bakubambe okuqukethwe nencazelo yesithombe ngisho nosayizi abancane.
Umfanekiso we-1 isithombe esilinganiselwe ngqo ezingeni lesithonjana saso, kepha Umfanekiso we-2 inqanyulwe kuzakhi ezibaluleke kakhulu zesithombe. Lokhu kuvumela abasebenzisi ukuthi baqonde ngokushesha ukuthi isithombe sizama ukuxhumana futhi kubakhuthaze ukuthi bachofoze ukuthola eminye imininingwane.
Ukugcwala kwesithombe ngamandla emibala. Ezithombeni ezingagcwali kakhulu, amathoni esikhumba abukeka egula futhi isibhakabhaka sibukeka mpunga futhi sifiphele. Ukwengeza impilo ezithombeni zakho, i-Photoshop CS4 inesihlungi engisincomayo esibizwa nge-Vibrance.
Uma ufuna ukuletha impilo ngokushesha ezithombeni zakho ezimfushane zama okulandelayo:
Faka isendlalelo esisha sokulungisa (Isendlalelo> Isendlalelo Sokulungisa Esisha> I-Vibrance)
Ukwandisa isilayidi se-Vibrance (Umfanekiso we-2) ngaphakathi kwephaneli Yokulungiswa kuzoqinisa umbala ngenkathi kuvikelwa amathoni esikhumba (ukuwavimbela ekubukeni i-orange kakhulu). Isilayida sokugcwalisa izikhala sinomphumela ofanayo, kepha sizoshintsha isithombe sonke, kufaka phakathi amathoni esikhumba.
Lezi zeluleko zimane nje ziyiphuzu leqhwa ngokwezinto ezicebile nezinamandla ezinikezwa yi-Photoshop zokulungisa nokwenza ngcono izithombe. Sicela unikeze inothi kumazwana uma kukhona amanye amasu ongathanda ukuthi achazwe.
Tags: i-adobe photoshop cs4isitshaloizithombe zezitshalolemifanekisoisithombeisivuno sesithombeukuthuthukisa isithombeisithombeIzithombeIzithombehopisithombe se-cs4imaski engacijileisihlungi se-mask esingacijileukudlidlizelaungqimba lokudlidlizela
I-VideoHere: Hlanganisa iVidiyo kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza